Muxuu ku soo arkay Kheyre xerada ay ku jiraan ciidamadii dhawaan lagu qarameeyay Dhuusamareeb? | HalQaran.com
Muxuu ku soo arkay Kheyre xerada ay ku jiraan ciidamadii dhawaan lagu qarameeyay Dhuusamareeb?
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre ayaa soo kormeeray xero ay ku jiraan ciidamada Ahlu sunna ee dhawaan la qarameeyay ee ku sugan magaalada Dhuusamarreeb.
Mr. Kheyre oo ciidamada la hadlay ayaa u sheegay in xukuumaddiisa aysan marna ka daali doonin dardar gelinta dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee dalka si bulshada Soomaaliyeed ay nabad ugu noolaato una soo ceshato sharafkeedii.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ballanqaaday in dib u dhis lagu samayn doono xerada ciidamada xoogga dalka ee 21-aad ee ku taalla maamul goboleedka Galmudug, waxa uuna intaa ku daray in saraakiisha qaarkood la siin doono tababar si ay u hoggaamiyaan howlgallada ciidamada ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Kheyre ayaa ugu baaqay ciidamada dhawaan ku soo biiray kuwa xoogga dalka in ay ka shaqeeyaan nabad ku wada noolaashaha dadka wada deggan deegaannada Galmudug.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo in ka badan hal bil ku sugnaa Galmudug ayaa ku howlanaa dadaallada dib u heshiisiinta ah ee loo samaynayo dadka ku dhaqan maamulkaas, taasoo ah tallaabo ay ammaaneen beesha caalamku.
Isku soo wada duub, waxaa la filayaa in bilaha soo socda ay Galmudug ka qabsoomaan doorasho lagu soo dooranayo hoggaan cusub.